ဘာသာရေးပြည်သူ့အသုံးပြုမှုနည်း Porn နှင့်အဘယ်သူမျှမပိုသူတို့ကစွဲဖြစ်ကြသည်ယုံဖို့ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏
ဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူများကယ့်ကိုညစ်ညမ်းစွဲကြသည်မဟုတ်, သူတို့သာသူတို့ရှက်ကြောက်ခြင်းကြောင့်သူတို့စွဲဖြစ်ကြသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဘာသာရေးအပေါ်အလွန်အမင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့လေ့လာမှုများလက်တဆုပ်စာနှင့် ပတ်သက်. ဆောင်းပါးများဘာသာရေးနှင့် Non-ဘာသာရေးနှစ်ခုလုံးကိုလူများစွာ, မှားယွင်းစွာတကယ်တော့အဖြစ်လက်ခံဖို့စတင်ထားသောဤတောင်းဆိုချက်များ, ဖြန့်ရပြီ။ သို့သော်အများအပြား Air-တင်းကျပ်စွာသစ်ကိုလေ့လာမှုများ (သူတို့၏အလုပ်အများဆုံးထိုကဲ့သို့သောဆောင်းပါးများအတွက်ကိုယ်စားပြုထားပြီးအလွန်သုတေသီများအားဖြင့်အချို့) အထက်ပါ3လက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှုဖျက်သိမ်း။
meme #1 တစ်ဦးအနေဖြင့်ပေါ်ပေါက် အနည်းငယ်လေ့လာမှုများ လိင်မှုဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းများကိုဂူးဂဲလ်ရှာဖွေမှုနှုန်းထားများကို "အနီရောင်ပြည်နယ်များ" (ဘာသာရေးနှင့်ရှေးရိုးစွဲပိုမိုများပြားစွာ) တွင်တွေ့ရှိရသည် နည်းသော လောကအသုံးပြုသူများသည်ထက် porn ။ လက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှု2နှင့်3ဆောင်းပါးတွေထဲကနေထ သုတေသီများ အများအပြား၏ရလဒ်များကိုချည်ငင် "ရိပ်မိညစ်ညမ်းစွဲဒေါက်တာယောရှုသည် Grubbs အားဖြင့် "လေ့လာမှုများ။
ပထမဦးစွာလေ့လာမှု: ဘာသာရေးလူတွေကိုသူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအမှန်တရားပြောပြ
In ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ-Related ကိုယ်ပိုင်အစီရင်ခံစာများအတွက်လူမှု Desire ဘက်လိုက်မှု: ဘာသာတရား၏အခန်းက္ပသုတေသီများကဘာသာရေးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းသုတေသီများသူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. နှင့်အမည်မသိစစ်တမ်းလေ့လာမှုများ၌အိပျဖို့ပိုများပါတယ်သောအယူအဆစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။
ပထမဦးစွာတစ်ဦးနောက်ပြန်တစ်ချက်။ အဆိုပါအယူအဆအားလုံးခွဲခြားစိတ်ဖြာအနည်းငယ်လေ့လာမှုများအပေါ်အိပ်ပျော် "မုသာစကားကို" State-by-ပြည်နယ် Google ၏ကြိမ်နှုန်းထိုကဲ့သို့သော "လိင်," "porn," "ကို XXX," နှင့်တူသောအဖြစ်သက်တမ်းအတွက်ရှာတတ်၏။ ဤရွေ့ကားပြည်နယ်အဆင့်လေ့လာမှုများ ( "အနီရောင်") ရှေးရိုးစွဲသို့မဟုတ်ဘာသာရေးမကြာခဏပိုပြီး porn-related အသုံးအနှုန်းများကိုရှာဖွေမှာဒီလိုဖော်ပြထားကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေ၏စာရေးဆရာများ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကို (1) ဘာသာရေးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူများအထို့ကြောင့်သုတေသီများသူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးလဲလျောင်းနှင့်အမည်မသိစစ်တမ်းများအတွက်ရမည်ဖြစ်သည် (2) non-ဘာသာရေးထက်ပိုညစ်ညမ်း watch, နှင့်ဆိုလိုကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။
သို့သော်တကယ်အဘယ်ကြောင့်နီးပါးအလုပ်သောလေ့လာမှုကိုရှင်းပြလဲလျောင်းနိုင် အမည်မသိ စစ်တမ်းများကိုတွေ့ဖူး အနိမ့် ဘာသာရေးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှုန်း (လေ့လာမှု 1, လေ့လာမှု 2, လေ့လာမှု 3, လေ့လာမှု 4, လေ့လာမှု 5, လေ့လာမှု 6, လေ့လာမှု 7, လေ့လာမှု 8, လေ့လာမှု 9, လေ့လာမှု 10, လေ့လာမှု 11, လေ့လာမှု 12, လေ့လာမှု 13, လေ့လာမှု 14, လေ့လာမှု 15, လေ့လာမှု 16, လေ့လာမှု 17, လေ့လာမှု 18, လေ့လာမှု 19, လေ့လာမှု 20, လေ့လာမှု 21, လေ့လာမှု 22, လေ့လာမှု 23, လေ့လာမှု 24, လေ့လာမှု 25) ။ ကျနော်တို့ကအများကြီးအမည်မသိစစ်တမ်းများယုံကြည်သင့်သလော သို့မဟုတ်ရှိသောနှစ်ခုပြည်နယ်အဆင့်ကို Google Search ကိုလမ်းကြောင်းသစ်လေ့လာမှုများ (MacInnis & Hodson မှ 2015; Whitehead & ပယ်ရီ, 2017)?
သုတေသီများ, သောယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်သည့်အခါ "ဘာသာရေးလူတို့သည်မိမိတို့ porn အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးလဲလျောင်းနေကြတယ်" ဟုသူတို့ကယူဆထောက်ပံ့မျှသက်သေအထောက်အထားများတွေ့ရှိခဲ့သည်။ တကယ်တော့သူတို့၏ရလဒ်များကိုဘာသာရေးကလူ porn အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. လောကတစ်ဦးချင်းစီထက်ပိုရိုးသားတဲ့ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုသည်။ တိုတိုမှာ State-ကျယ်ပြန့်နှိုင်းယှဉ်ချဉ်းကပ်ရှင်းလင်းစွာဒီခေါင်းစဉ်သုတေသနတစ်ခုချို့ယွင်းချက်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာစျယာနျဘာသာတရားကို၏တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်ရဲ့အဆင့်ကိုဖော်ထုတ်သောအမည်မသိစစ်တမ်းများကဲ့သို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောမဟုတ်ပါဘူး။
သို့သော်လူကြိုက်များသောစိတ်သဘောထားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ယူဆချက်များနှင့်ဆန့်ကျင်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘာသာရေးလူပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းမှုမရှိသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုကိုအစီရင်ခံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမို၍ သိသာထင်ရှားသည့်လူမှုရေးဆန္ဒရှိမှုဘက်လိုက်မှုရှိသည်ဟူသောအကြံပြုချက်နှင့် ပတ်သက်၍ သက်သေအထောက်အထားများနှင့်သက်သေအထောက်အထားများစွာတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ ထိုဖြစ်နိုင်ချေကိုအကဲဖြတ်သည့်အပြန်အလှန်အသုံးအနှုန်းများသည်ပြောင်းပြန်လမ်းကြောင်းတွင်သိသိသာသာသို့မဟုတ်အရေးပါမှုရှိသည်။
ဤရလဒ်သည်ဘာသာရေးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစားသုံးမှု underreporting ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ဘာသာရေးထက် သာ. ကြီးမြတ်ခြင်းနှင့်ဘာမှမပါလျှင်, သုတေသီများမှဘာသာရေးအတိုက်အခံလျှော့တွက်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းစားသုံး၏ရှောင်ရှားခဲ့ကြကြောင်းအကြံပြုတစ်ဒီဂရီမှညစ်ညမ်းဖို့သူတို့ရဲ့အတိုက်အခံ overstating သောဇာတ်ကြောင်း fit ပါဘူး။
ထို့ကြောင့်မဟုတ်ဘဲအဖြစ်စံတန်ဖိုး porn အသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦးအရှက်ကွဲခြင်း-based Self-တံဆိပ်ကပ်ခြင်းဖြစ်စေတဲ့ထက် "porn စွဲ," ဘာသာတရား porn အသုံးပြုမှုကို (ဤသို့ပြဿနာ porn ကိုအသုံးပြုခြင်း) ဆန့်ကျင်အကာအကွယ်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
သို့ဆိုလျှင်“ အနီရောင်ပြည်နယ်များ” တွင်လိင်နှင့်သက်ဆိုင်သောဝေါဟာရများကိုရှာဖွေခြင်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းကဘာကိုရှင်းပြနိုင်သလဲ။ တစ်နာရီကြာမျှသော session တစ်ခုတွင်ပါဝင်သောပုံမှန် porn သုံးစွဲသူများသည်သုတေသီများစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည့်အတော်လေးအပြစ်မဲ့သောဝေါဟာရများ (“ XXX”,“ sex”,“ porn”) ကိုရှာဖွေရန် Google ကိုအသုံးပြုသည်မှာမဖြစ်နိုင်ပါ။ သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောပြွန်ဆိုဒ်များသို့တိုက်ရိုက်သွားမည် (bookmarked ဖြစ်နိုင်သည်)
အခြားတစ်ဖက်တွင်, လိင်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းအကြောင်းကိုစပ်စုနေသောလူငယ်များထိုကဲ့သို့သော Google ရှာဖွေရေးဝေါဟာရများ employ ပေလိမ့်မည်။ ဘာလို့ထင်လဲ? မြီးကောင်ပေါက်များ၏အမြင့်ဆုံးအချိုးအစားနှင့်အတူ 15 ပြည်နယ်များဖြစ်ကြသည်ဘာသာရေးနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုရည်မှတ်ပိုပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်ဤဆောင်းပါးကိုတွေ့မြင် "အနီရောင်ပြည်နယ်များ။ ": Utah #1 Porn အသုံးပြုမှုရှိပါသနည်း
ဘေးဖယ် an: ဘာသာရေးနှင့်ညစ်ညမ်းမှုခေါင်းစဉ်ကိုမစွန့်လွှတ်မီသုတေသီအချို့ကဘာသာရေးလူမျိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ မိမိတို့၏ဘက်လိုက်မှုများကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းခဲ့သည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။ ယူ "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသိန်များအတွက် surfing"MacInnis နှင့် Hodson အားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ ဤသုတေသီများကဘာသာရေးလူများသည် (အစိုးရအဆင့်ဘာသာရေးနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာဂူးဂဲလ်ရှာဖွေမှုဝေါဟာရများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပိုမိုကြည့်ရှုသည်ဟူသောသံသယရှိသောကောက်ချက်များမှာနယ်ပယ်ရှိသုတေသနရလဒ်အများစုနှင့်မကိုက်ညီပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, MacInnis နှင့် Hodson ကိစ္စရပ်များကိုတစ်လှမ်းချင်းဝေးသွားခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်ဘာသာရေးဆိုင်ရာပါ ၀ င်သူများနှင့်၎င်းတို့၏နိဂုံးချုပ်ကိုမျှဝေပြီးတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ယာနျဘာသာတရားကိုသို့မဟုတ်ဘာသာရေးအခွခေံအတွက်ပိုမိုမြင့်မား ( vs. နိမ့်) အဲဒီဘာသာရေးပြည်နယ်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသိပညာနှင့်အတူတွေ့ရှိချက်ကိုပိုမိုကိုက်ညီမှုစဉ်းစား, တွေ့ရှိချက်များကိုလျော့နည်းစစ်မှန်တဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်, စာရေးဆရာများနိုင်ငံရေးအရလှုံ့ဆော်မှုဆင်ခြင်၏။
အထက်ပါသုတေသနကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဘာသာရေးတွင်ပါ ၀ င်သူများသည်သုတေသီများ၏မှားယွင်းသောနည်းစနစ်နှင့်ကောက်ချက်ထက်၎င်းတို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဗဟုသုတကိုအားကိုးထိုက်သည်။
ဒုတိယလေ့လာမှု -ကိုယ့်ကိုကိုယ်ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းစေခြင်းလို့ယုံကြည်တယ်"အသုံးပြုမှုနှင့်အတူပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်နွယ်နေကြောင်း, ဒါပေမယ့်ဘာသာတရားနှင့်အတူ (စက္ကူဖို့ link ကို)
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကဒေါက်တာယောရှုသည် Grubbs ရှိပါတယ် လေ့လာမှုတစ်ခုအဖုရေးသား ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများ၏ဘာသာရေး၊ ညစ်ညမ်းသောနာရီအသုံးပြုမှု၊ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှုနှင့်အခြားပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများနှင့်ဆက်စပ်သောသူ၏ ၉ ပုဒ်ပါသော“ ဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုစာရင်း” (CPUI-9) တွင်ရမှတ်များပါရှိသည်။ တစ်ခုမှာ အများကြီးရှုပ်ထွေးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြတော်မူကြောင်းကိုထူးဆန်းဆုံးဖြတ်ချက်, Grubbs သည်အကြောင်းအရာတစ်ခု၏ CPUI-9 ရမှတ်ကို“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းသည်ဟုမှတ်ယူသည်။"ဒါကတူရိယာတစ်နည်းနည်းနဲ့သူတစ် ဦး ဘာသာရပ်သူကို" စွဲ "မျှသာဖြစ်ခြင်း၏အတိုင်းအတာဖော်ပြသည် (ဖြစ်ခြင်းထက်) တကယ်တော့ ) စွဲ။ သို့ရာတွင်အဘယ်သူမျှတူရိယာဒီတစ်ခုကြောင့်မနှင့်ဆက်ဆက်လို့မရပါဘူး။
နောက်တစ်နည်းပြောရလျှင်၊ “ ရိပ်မိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာစွဲလမ်းမှု” ဟူသောစကားစုသည်နံပါတ်ထက်မပိုပါ။ အောက်ပါ ၉ ခုပါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုမေးခွန်းလွှာတွင်အပြစ်ရှိကြောင်းနှင့်အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ မေးခွန်းသုံးခုပါရှိသည်။ ဂျုံသည်ဂျုံစပါးကိုအမှည့်အနေဖြင့်စစ်မှန်သောစွဲလမ်းမှုနှင့်မတူပါ။
သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့, CPUI-9 အမှန်တကယ် porn စွဲများနှင့်ညစ်ညမ်းစွဲမှာ "ယုံကြည်ချက်" အကြားခွဲခြားလို့မရပါဘူး။ မည်သည့် Grubbs လေ့လာမှုတွင်မဆိုဘာသာရပ်များသည်သူတို့ကိုယ်သူတို့“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသူများ” ဟုဘယ်တော့မှမသတ်မှတ်ခဲ့ပါ။ သူတို့သည်အထက်ပါမေးခွန်း ၉ ခုကိုသာဖြေ ဆို၍ စုစုပေါင်းရမှတ်ရရှိခဲ့သည်။
မီဒီယာစျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်စုစုပေါင်း CPUI-9 ရမှတ် (ယခု misleadingly တံဆိပ်ကပ် "ကိုရိပ်မိစွဲ") အကြားဆက်စပ်မှုပေါ်သို့ဆွဲများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်သတင်းစာဆရာများသာဘာသာရေးကလူ "သို့တွေ့ရှိချက် morphed ယုံကြည် ။ သူတို့က porn စွဲနေ "မီဒီယာ porn အသုံးပြုမှု CPUI-9 ရမှတ်များနှင့်နာရီအကြားရုံ-အဖြစ်-ခိုင်မာတဲ့ဆက်စပ်မှုကိုလျစ်လျူရှု, ဒါဝိဒ် Ley အားဖြင့်ဤ blog post ကိုနဲ့တူတိဆောင်းပါးများရာပေါင်းများစွာထွက် pumped: Porn စွဲ၌သင်တို့၏ယုံကွညျအရာပိုဆိုးတာကကို: "porn စှဲလမျးသူ" ၏တံဆိပ်စိတ်ကျရောဂါဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုမဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤတွင် Ley ၏ Joshua Grubbs လေ့လာမှု၏တိကျသောဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ တစ်စုံတစ် ဦး ကသူတို့သည်လိင်စွဲလမ်းသည်ဟုယုံကြည်လျှင်၎င်းယုံကြည်ချက်သည်အမှန်တကယ်အသုံးပြုနေသောညစ်ညမ်းမှုမည်မျှပင်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မည်မျှနည်းသည်ဖြစ်စေ၊
Ley ရဲ့မှားယွင်းစွာတင်ပြဖယ်ရှားခြင်း, အထက်ပါဝါကျတိကျစွာဖတ်ပါလိမ့်မယ်:
CPUI-9 တွင်ပိုမိုမြင့်မားသောရမှတ်များသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်သောကရောက်စရာမေးခွန်းလွှာ (စိုးရိမ်စိတ်၊ စိတ်ကျရောဂါ၊ အမျက်ဒေါသ) နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။
A Non-Grubbs လေ့လာမှု ရိပ်မိသို့မဟုတ်အမှန်တကယ်ဖြစ်စေ porn စွဲအကဲဖြတ်ရန်တူရိယာအဖြစ်မေးခွန်းများကို CPUI-9
အထက်ပါလေ့လာမှုများ Grubbs ရဲ့အစောပိုင်းကောက်ချက်တို့ကို ပတ်သက်. သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအပေါ်သံသယကိုနှင်ထုတ်ဖို့သာသူမြားမဟုတျပါ။ လယ့်စုံတွဲလွန်ခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ, 2017 အတွက်နောက်ထပ်လေ့လာမှု Grubbs ရဲ့ယူဆချက်တဦးတည်းစမ်းသပ်ပြီးသောပြည်မှထွက်လာသော: ဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Inventory-9 ရမှတ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအတွက်အမှန်တကယ် compulsive စဉျးစားကွညျ့သလား? Abstinence ကြိုးပမ်းမှု၏အခန်းက္ပ Exploring.
အဆိုပါသုတေသီများတိုင်းတာ အမှန်တကယ် compulsive 14 နေ့ရက်ကာလအဘို့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်သင်တန်းသားများကိုတောင်း။ (လေ့လာမှုတစ်ခုသာလက်တဆုပ်စာ ယင်း၏သက်ရောက်မှုထုတ်ဖေါ်ဖို့အရှိဆုံးတည်ပြီးသတ်တယ်နည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်သည့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုတို့ကိုရှောင်သင်တန်းသားများကိုမေးမွနျးခဲ့ကြ။ )
လေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်သူများသည် CPUI-9 ကို ၁၄ ရက်ကြာ porn abstinst အားမကြိုးစားမီနှင့်အပြီးယူခဲ့သည်။ (သတိပြုရန်မှာသူတို့သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်လိင်မှုကိစ္စကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲအင်တာနက်မှတစ်ဆင့်သာဖြစ်သည်။ ) သုတေသီများ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ CPUI-14 ၏အပိုင်း ၃ ပိုင်း၏ရမှတ်များမတိုင်မှီနှင့် 'အပြီး' နှိုင်းယှဉ်ရန်ဖြစ်သည်။
(အခြားတွေ့ရှိချက်များထဲတွင်ဒီနေရာမှာနက်ရှိုင်းတှငျဆှေးနှေး), အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း (abstinence ကြိုးစားမှုမအောင်မြင်ခဲ့) ကို CPUI-9 ရဲ့ဆက်နွယ်နေကြောင်း အမှန်တကယ် စွဲမေးခွန်းများ 1-6, ဒါပေမယ့် CPUI-9 ရဲ့အပြစ်ရှိတယ်နှင့်အရှက်ကို (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲ) မေးခွန်းများ 7-9 နှင့်အတူမ။ အလားတူစွာ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကို“ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှု” သည် CPUI-9“ Perceived Compulsivity” ရမှတ်များနှင့်အနည်းငယ်သာဆက်စပ်မှုရှိသည်။ တီhese ရလဒ်များအရ CPUI-9 အပြစ်ရှိမှုနှင့်ရှက်ဖွယ်မေးခွန်းများ (၇-၉) သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု (သို့မဟုတ်“ ရိပ်မိသောညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှု”) ၏အကဲဖြတ်မှုတွင်မပါဝင်ရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့ porn အသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေမသက်ဆိုင်သောများမှာ.
, ကွဲပြားခြားနားကြောင့်ပြော အများဆုံးစွဲဘာသာရပ်များလုပ်ခဲ့တယ် မဟုတ် ယာနျဘာသာတရားကိုအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားဂိုးသွင်း။ ထို့အပွငျနေပါစေအဲဒါကိုတိုင်းတာဘယ်လို, အမှန်တကယ် porn စွဲ / compulsive ပြင်းပြင်းထန်ထန်မဟုတ်ဘဲ "စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲ" မေးခွန်းများကို (အပြစ်ရှိတယ်, အရှက်ကွဲ) နှင့်နေသည်ထက်, porn အသုံးပြုမှုအဆင့်မြင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာရေးမဟုတ် "အကြောင်းမရှိ" porn စွဲပါဘူး။ ယာနျဘာသာတရားကိုဖြစ်ပါသည် မဟုတ် သငျသညျ porn စွဲနေကြသည်ယုံနှင့်ဆက်စပ်သော။
ကြည့်ရှုအားပေး porn ပမာဏကိုအမှန်တကယ် porn စွဲသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးက porn စွဲကြောင်းယုံကြည်ချက်၏ (ဝေးသဖြင့်) ကိုအပြင်းထန်ဆုံးခန့်မှန်းသည်။
Grubbs လေ့လာမှုများ (သို့မဟုတ် CPUI-9 ကိုသုံးသောလေ့လာမှုတစ်ခု) သည်အမှန်တကယ်တွင်“ ရိပ်မိသောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” သို့မဟုတ်“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုအပေါ်ယုံကြည်မှု” သို့မဟုတ်“ သူတစ်ပါးအားမိမိကိုယ်ကိုတံဆိပ်ကပ်ခြင်း” ကိုအမှန်တကယ်စွဲလမ်းခြင်းနှင့်ခွဲခြား။ မရပေ။ ။
တုန်လှုပ်ချောက်ချား & အလွန်သက်ဆိုင်ရာ update ကို
CPUI-9 နှင့် MI stduies (Joshua Grubbs နှင့် Samuel Perry) တို့ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်အဓိကစာရေးဆရာနှစ် ဦး ကနှစ် ဦး စလုံး၏အစီအစဉ်အပေါ်ဘက်လိုက်မှု တရားဝင် ပူးပေါင်းမဟာမိတ်များ နီကိုးလ် Prause နှင့် ဒါဝိဒ်သည် Ley တိတ်ဆိတ်ဖို့ကြိုးစားနေ၌တည်၏ YourBrainOnPorn.com။ Perry, Grubbs နှင့် www.realyourbrainonporn.com မှအခြားညစ်ညမ်းသော“ ပညာရှင်” များသည်ပါ ၀ င်သည် တရားမဝင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုနှင့်ကီထိုင်။ စာဖတ်သူကိုသိသင့်ပါတယ် RealYBOP twitter (၎င်း၏ကျွမ်းကျင်သူများ၏သိသာခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူ) လည်းအသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်ခြင်းတွင်ပါဝင်နေသည် ဂယ်ရီ Wilson က, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes, ဂါယူဆပါသည် နှင့် NCOSE, Laila Mickelwait, GAIL ထမင်းစားခန်းနှင့် ညစ်ညမ်းမှု၏အန္တရာယ်များအကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုသူအခြားမည်သူမဆို။ ဒါ့အပြင် David Ley နှင့်အခြား“ RealYBOP” ကျွမ်းကျင်သူနှစ်ယောက်လည်းရှိသည် porn စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးများကလျော်ကြေးငွေခံရ xHamster (၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမြှင့်တင်ရန်ဆိုလိုသည်မှာ StripChat) နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုသည်ဒဏ္areာရီများဖြစ်သည်ဟုသုံးစွဲသူများကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်။ ချီးမွမ်းကြလော့ RealYBOP twitter ကိုဖွင့်သည်) ဖြစ်ပေါ်လာသည် အဆိုပါညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူအတော်လေးအဆင်ပြေနေနှင့် RealYBOP twitter ကိုသုံးသည် ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းကိုမြှင့်တင်ရန်, PornHub ကိုခုခံကာကွယ်ပါ (ကလေးညစ်ညမ်းသောလိင်နှင့်လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာဗီဒီယိုများပါ ၀ င်သည်) နှင့် အသနားခံစာကိုအားပေးတဲ့သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပါ ကျင်းပရန် PornHub တာဝန်ခံ။ RealYBOP ၏“ ကျွမ်းကျင်သူများ” သည်၎င်းတို့၏ RealYBOP အသင်း ၀ င်မှုကိုသက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများတွင်“ အကျိုးစီးပွားပmembershipိပက္ခ” အဖြစ်စာရင်းသွင်းရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။